Cristiano Ronaldo Oo Aamusnaantii Ka Baxay, Dhawr Kalmadood Oo Uu Kaga Jawaabay Wararkii Xanta Suuqa Iyo Boggaga Hore Ee Wargaysada Italy Oo Looga Hadlay. - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Aamusnaantii Ka Baxay, Dhawr Kalmadood Oo Uu Kaga Jawaabay Wararkii Xanta Suuqa Iyo Boggaga Hore Ee Wargaysada Italy Oo Looga Hadlay.
Tan iyo markii kooxda Juventus laga reebay tartanka UEFA Champions League, waxaa soo baxayay warar sheegayay in Ronaldo aanu dhamaysan doonin heshiiskiisa Juventus isla markaana ay suurtogal tahay in uu dhamaadka xili ciyaareedkan ka bixi karo Old Lady.
Wargaysada Talyaaniga ayaa maanta siyaabo kala duwan uga hadlay xaalada Juventus iyo Cristiano Ronaldo iyada oo xidiga reer Portugal uu dhawr kalmood kaga jawaabay wararka xanta suuqa ee mustaqbalkiisa mugdiga galinayay.
Wararka soo baxay ayaa waxay sheegayeen in Ronaldo in Ronaldo ay iska hor yimaaddeen ciyaartoyga kooxdiisa iyo tababare Allegri oo ay is khilaafeen, taas oo keentay inuu dalbado inuu iskaga tago kooxda.
Sida uu qoray wargeyska Tuttosport ee kasoo baxa waddanka Talyaaniga, laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay wararkaas, waxaanu tilmaamay wararkii sheegayay bixitaankiisa Juventus ay yihiin warar been ah.
Wargeysku waxa uu sheegay in Ronaldo uu afar kalmadood oo kaliya kaga jawaabay hadallada suuqa ku jira kuwaas oo uu ku cadeeyay in uu sii joogayo kooxdiisa hadda ee Juventus oo lacag qaali ah ka soo bixisay.
Cristiano Ronaldo ayaa beeniyay warrakii sheegayay in uu ka baxayo kooxdiisa Juventus kadib cadhadii ka soo hadhitaanka Champions League wuxuuna yidhi”Aniga ahaan, kaliya Juventus ayaan ahay.”. Hadalkan ayaa dajinaya quluubta jamaahiita Juventus ee maalmihii la soo dhaafay walwal sanaa.
Wargayska Tuttosport oo bogga hore ee caddadkii maanta soo baxay ku soo qaaday Ronaldo ayaa qoraalka looga hadlay waxaa lagu sii yidhi: “Rabitaankiia guusha iyo in uu Baiconeri ku sii xidhnaado kaliya waxaa sii xoojiyay niyadjabkii Champions league”.
Waxaana la sii raaciyay hadalkii Maxi Allegri: “Crisitano waa mustaqbalka. Haddii aanu ku guulaysan lahayn koobka horyaalkayaga ee markii siddeedaad oo xidhiidh ah, waali ayay noqon doontaa haddii aan loo dabaal degin”.
Dhinaca kale wargayska Corriere dello Sport ayaa isna bogga hore ee caddadkii wargayskiisa ee maanta waxa uu ku soo qaaday Juventus iyo Ronaldo waxaana qoraalka lagu yidhi: “Juve hal dhibic oo kaliya ayay Fiorentina uga baahan tahay si ay markii saddexaad oo xidhiidh ah ugu guulaysato Schudetto”.
Laakiin bogga hore ee Corriere dello Sport ayaa lagu sheegay: “Wali waxaa gubaya ka bixitaankii Yurub. Allegri wuu ka gilgishay ‘Aan hanwayni dareeno’ Laakiin muuqaal uu Ronaldo leeyahay ayaa mustaqbalkiisa hadheeyay”.
Laacibka reer Portugal oo €110 milyan ay Juventus kaga iibsatay Real Madrid ayaa waxa uu labadii ciyaarood ee Ajax u dhaliyey kooxdiisa min hal gool, laakiin waxa uu ku guul-darraystay inuu usoo saaro wareegga semi-finalka.
Si kastaba ha ahaatee, Cristiano Ronaldo iyo Juventus ayaan xili ciyaareedkan helin wixii uu hamigooda ugu wayni ahaa oo ay doonayeen kaas oo ahaa in ay UEFA Champions League ku guulaystaan.